ကိုယ်ချင်းစာတရားနောက်ကွယ်က တန်ပြန်သက်ရောက်မှုများ – Trend.com.mm
Posted on April 23, 2018 April 23, 2018 by Wint
မနေ့က ကျွန်မ ATM စက်မှာ ပိုက်ဆံသွားထုတ်တယ်။ ပိုက်ဆံထုတ်ဖို့ကြည့်တော့ စက်ထဲကနေ ပိုက်ဆံတွေမထုတ်ရသေးပဲ တန်းလန်းကြီးထားထားတာတွေ့ရတယ်။ (၅)သိန်းလောက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မလည်း အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေကို ယူပြီးတော့ ဘဏ်မန်နေဂျာဆီ သွားအပ်လိုက်တယ်။ မန်နေဂျာက ကျွန်မကို ” ကျွန်တော် ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲ” တဲ့ ။
” ATM စက်မှာ ဘယ်သူပိုက်ဆံလာထုတ်သွားလည်းဆိုတာ သေချာစိစစ်လိုက်ရင် အကောင့်ပိုင်ရှင်သိရတဲ့အခါ ပိုက်ဆံပြန်ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် ” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်မပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက် ဝမ်းသာအားရပြီး ဘဏ်ထဲကနေပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ ဘဏ်မန်နေဂျာဆီက ဖုန်းလာတယ်။ ပိုက်ဆံပိုင်ရှင်ကို ပြန်တွေ့သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အံ့သြစရာကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီး ကျွန်မကိုပြောပါတယ်။ ပိုင်ရှင်က အသက် (၉၂)နှစ် အဘွားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေက သူမရဲ့အိမ်လခပေးဖို့လို့ သိရပါတယ်။ ငွေလက်ခံစာရွက်ကိုပဲထုတ်ပြီး ပိုက်ဆံကိုကျတော့ ထုတ်ဖို့မေ့သွားခဲ့တာပါတဲ့။
သူမရဲ့အိမ်လခက ၄သိန်း၈သောင်းပဲကျတဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ကျွန်မကိုပေးချင်တယ်လို့ပြောလာတယ်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ပိုက်ဆံဘာမှမပိုတော့ရင် အဘွားဘာနဲ့စားသောက်နေထိုင်မလဲဆိုတာ သိချင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ အဲ့ဒီ ပိုက်ဆံကိုကျွန်မ,မယူပါဘူး။ အဘွားက အနေမချောင်ပေမယ့် သဘောထားကတော့သိပ်ကြီးမားတယ်လို့လည်း အတွေးဝင်မိတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်မ ဘဏ်မန်နေဂျာကို ဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မဆီကနေ အဘွား အကောင့်ထဲကို (၂)သိန်းလောက် လွှဲပေးပါလို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ အခြား ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကလည်း ကျွန်မရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာ ဘာအတွက်လည်းဆိုတာသိရော နောက်ထပ် (၁)သိန်းလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။ ခဏလည်းကြာရော ဘဏ်မန်နေဂျာဆီက ဖုန်းပြန်ဝင်လာတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေအားလုံး အဘွားအတွက် စိတ်ကူးပေါက်ပြီး နောက်ထပ်၃သိန်းလောက် လွှဲပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ကျွန်မ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး။ ဘယ်လောက် ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်လဲ !
ကျွန်မရဲ့လုပ်ရပ်လေးတစ်ခုကြောင့် အဘွားရဲ့ဘဝအဆင်ပြေချောမွေ့သွားတာတွေ့တော့ ၀မ်းသာကြည်နူးမိတယ်။ ကျွန်မတို့ဘက်က ပေးဆပ်လိုက်တဲ့အရာဟာ ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ သေးသည်ဖြစ်စေ ၊ တစ်ဖက်သားအတွက် အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင် တူညီတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတော့ ခံစားရစမြဲပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ထဲက စေတနာသန့်သန့်နဲ့ကူညီပါ။ ချစ်ခင်ပါ။ ကြင်နာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဟာ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေပါလိမ့်မယ်။ သေးငယ်တဲ့ ခြေလှမ်း ၊ သေးငယ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ မသိသာပေမယ့် ရိုက်ခက်မှုကတော့ အကျိုးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
မနကေ့ ကြှနျမ ATM စကျမှာ ပိုကျဆံသှားထုတျတယျ။ ပိုကျဆံထုတျဖို့ကွညျ့တော့ စကျထဲကနေ ပိုကျဆံတှမေထုတျရသေးပဲ တနျးလနျးကွီးထားထားတာတှရေ့တယျ။ (၅)သိနျးလောကျရှိပါတယျ။ ကြှနျမလညျး အဲ့ဒီပိုကျဆံတှကေို ယူပွီးတော့ ဘဏျမနျနဂြောဆီ သှားအပျလိုကျတယျ။ မနျနဂြောက ကြှနျမကို ” ကြှနျတျော ဘယျလိုကူညီပေးရမလဲ” တဲ့ ။
” ATM စကျမှာ ဘယျသူပိုကျဆံလာထုတျသှားလညျးဆိုတာ သခြောစိစဈလိုကျရငျ အကောငျ့ပိုငျရှငျသိရတဲ့အခါ ပိုကျဆံပွနျပေးနိုငျမယျထငျပါတယျ ” လို့ ပွောလိုကျတယျ။ကြှနျမပွုလုပျခဲ့တဲ့အရာအတှကျ ဝမျးသာအားရပွီး ဘဏျထဲကနပွေနျထှကျလာခဲ့တယျ။
အဲ့ဒီနမှေ့ာပဲ ဘဏျမနျနဂြောဆီက ဖုနျးလာတယျ။ ပိုကျဆံပိုငျရှငျကို ပွနျတှသှေ့ားပွီဖွဈကွောငျးနဲ့ အံ့သွစရာကိစ်စတဈခုရှိတယျဆိုပွီး ကြှနျမကိုပွောပါတယျ။ ပိုငျရှငျက အသကျ (၉၂)နှဈ အဘှားတဈယောကျဖွဈပွီး အဲ့ဒီပိုကျဆံတှကေ သူမရဲ့အိမျလခပေးဖို့လို့ သိရပါတယျ။ ငှလေကျခံစာရှကျကိုပဲထုတျပွီး ပိုကျဆံကိုကတြော့ ထုတျဖို့မသှေ့ားခဲ့တာပါတဲ့။
သူမရဲ့အိမျလခက ၄သိနျး၈သောငျးပဲကတြဲ့အတှကျ ကနျြတဲ့ပိုကျဆံကို ကြေးဇူးတငျတဲ့အနနေဲ့ ကြှနျမကိုပေးခငျြတယျလို့ပွောလာတယျ။ သခြောစဉျးစားကွညျ့တော့ ပိုကျဆံဘာမှမပိုတော့ရငျ အဘှားဘာနဲ့စားသောကျနထေိုငျမလဲဆိုတာ သိခငျြခဲ့တယျ။ ဒီတော့ အဲ့ဒီ ပိုကျဆံကိုကြှနျမ,မယူပါဘူး။ အဘှားက အနမေခြောငျပမေယျ့ သဘောထားကတော့သိပျကွီးမားတယျလို့လညျး အတှေးဝငျမိတယျ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကြှနျမ ဘဏျမနျနဂြောကို ဖုနျးပွနျဆကျလိုကျပါတယျ။
ကြှနျမဆီကနေ အဘှား အကောငျ့ထဲကို (၂)သိနျးလောကျ လှဲပေးပါလို့ တောငျးဆိုခဲ့တယျ။ အခွား ဘဏျဝနျထမျးတှကေလညျး ကြှနျမရဲ့တောငျးဆိုမှုဟာ ဘာအတှကျလညျးဆိုတာသိရော နောကျထပျ (၁)သိနျးလှဲပေးလိုကျပါတယျ။ ခဏလညျးကွာရော ဘဏျမနျနဂြောဆီက ဖုနျးပွနျဝငျလာတယျ။ ဝနျထမျးတှအေားလုံး အဘှားအတှကျ စိတျကူးပေါကျပွီး နောကျထပျ၃သိနျးလောကျ လှဲပေးလိုကျပွီဖွဈကွောငျး ပွောပွပါတယျ။ ကြှနျမ ယုံတောငျမယုံနိုငျဘူး။ ဘယျလောကျ ကွညျနူးဖို့ကောငျးလိုကျလဲ !
ကြှနျမရဲ့လုပျရပျလေးတဈခုကွောငျ့ အဘှားရဲ့ဘဝအဆငျပွခြေောမှသှေ့ားတာတှတေ့ော့ ဝမျးသာကွညျနူးမိတယျ။ ကြှနျမတို့ဘကျက ပေးဆပျလိုကျတဲ့အရာဟာ ကွီးသညျဖွဈစေ၊ သေးသညျဖွဈစေ ၊ တဈဖကျသားအတှကျ အဆငျပွသှေားတယျဆိုရငျ တူညီတဲ့အကြိုးသကျရောကျမှုကိုတော့ ခံစားရစမွဲပါ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ စိတျထဲက စတေနာသနျ့သနျ့နဲ့ကူညီပါ။ ခဈြခငျပါ။ ကွငျနာပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ သငျ့ဘဝတဈလြှောကျလုံးဟာ စိတျခမျြးသာမှုတှနေဲ့ပဲ ပွညျ့နပေါလိမျ့မယျ။ သေးငယျတဲ့ ခွလှေမျး ၊ သေးငယျတဲ့ လုပျရပျတှဟော မသိသာပမေယျ့ ရိုကျခကျမှုကတော့ အကြိုးထိရောကျမှုရှိပါတယျ။
ခပ်ကြမ်းကြမ်းအက်ရှင်ကားတွေကိုမှ ကြည့်ချင်သူတွေအတွက် ” The Equalizer2 ”